Media file တွေ၊ Document File တွေကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Format ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ ဘာ Software မှ Install လုပ်စရာမလိုဘဲ သီချင်းလေးတွေကို Mp3, ACC စသဖြင့် ဘယ် Format ကိုပဲပြောင်းပြောင်း၊အဲဒါတွေမှမက စုံအောင်ပြောရရင် စာရိုက်ထားတဲ့ .doc Format ကိုတောင်မှ ဘာ Software မှမလိုဘဲ .pdf File အနေနဲ့ပြောင်းပေးလို့ရတဲ့ ဆိုက်ကလေးတစ်ခုက www.online-vonvert.com ပါတဲ့။
အဲဒီမှာ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး Converter Type ပေါ်မှာရှိတဲ့ Drop Down Menu လေးထဲမှာ ကိုယ်ပြောင်းမဲ့ Target Format (ဥပမာ- mp3,mp4 စသည်ဖြင့်) ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် နောက်တစ်မျက်နှာမှာ ကိုယ် ပြောင်းချင်တဲ့ File လေးကို Browse လုပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ ကိုယ် ဘာ File Type ကိုပဲပြောင်းချင်ပြောင်းချင် Internet Connection လေး ရှိရုံနဲ့ ပြောင်းလို့ရနိုင်ကြမှာပါ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းလေးတွေကို Mp3, Mp4 ပြောင်းဖို့အတွက် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ရေးထားတဲ့ စာလေး တွေကို Ebook ပြောင်းဖို့အတွက် အင်တာနက်ပေါ်မှာ တွေလိုက်ရှာနေရတဲ့ ဒုက္ခကင်းဝေးကြပြီပေါ့နော်။
အွန်လိုင်းမှာ ဓာတ်ပုံတွေကို ရယ်စရာပုံအနေနဲ့ပြုလုပ်ချင်သူများအတွက် လင့်ခ်လေးတွေ -
(1).BeFunky (11) Hairmixer
(2.)FunPhotoBox (12) BigHugeLabs Flickr
(3.) PhotoFunia (13) FaceInHole
(4.) Photo 505 (14) Fake Magazine Cover
(5.) Cameroid (15) FotoTrix – Image Generator
(6) Loonapix (16) Picnik
(7) Dumpr (17) Dynamic Einstein picture
(8) WriteOnIt (18) PixiSnap
(9) MagMyPic (19) Blingee
(10) Hollywood Hair Virtual Makeover (20) Pizap
G-mail ရဲ့စာတွေကို ဘာသာပြန်ဖတ်နည်း
Gmail ကစာတွေကို ဘာသာပြန်ဖတ်ဖို့ Message translation ဆိုတဲ့စနစ်ရှိပါတယ်။
သင့်ဆီကို သင်နားမလည်တဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ Mail ရောက်လာခဲ့ရင် သင်နားလည်တဲ့ Language တွေနဲ့ပြောင်းနိုင်ပါပြီ။
(၁) Gmail ရဲ့ Setting မှ Labs ထဲက Message Translation ကိုရှာပါ။
(၂) Message Translation ကို Enable လုပ်ပါ။
(၃) အောက်ဆုံးရှိ Save Change ကိုနှိပ်ပါ။
(၄) ၀င်လာတဲ့ Mail ကို Translate Message to: English ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီး English လိုဖတ်နိုင်ပါတယ်။ Change Language မှာ English ဘာသာစကားအပြင် တခြားဘာသာစကားတွေလည်း ပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ အဆင်ပြေမှာပါ။
Credit: G-Mail Inbox